संसद विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै, के आज नयाँ संवैधानिक इजलास गठन होला त ?
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:४५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत विषयमा परेका मुद्दामा आइतबार (आज) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । संवैधानिक इजलासमा नै विवाद भएपछि रोकिएको संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो ।
त्यो विवादमा न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय लिएपछि संवैधानिक इजलासबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय लिएका थिए ।
सोही कारण इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।